Afaka miakatra indray ve ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany ho toeran-kaleha?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Afaka miakatra indray ve ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany ho toeran-kaleha?
Mpanoratra Frank Haas
Ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany dia miaina TOURISM MELTDOWN
Vokatry ny trano fandraisam-bahiny COVID-19 any amin'ireo faritra miankina amin'ny fizahan-tany toa ny hotely sy ny toeram-pizahantany hikatona dia nikatona ireo mpandeha tonga, nitombo ny filazan'ny tsy an'asa ary ny isan'ny mpandeha isan'andro dia 30,000 miampy zato vitsivitsy.
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nifindra avy tamin'ny “fizahan-tany be loatra” i Hawai'i ary tsy nisy fizahan-tany mihitsy. Fiovana lehibe tokoa tamin'ny volana vitsy lasa izay, rehefa manahy ny sasany fa “be loatra ny mpizahatany.”
Na dia mangirifiry aza ny fanaintainana ara-toekarena noho ny fianjeran'ny fizahan-tany dia nanome antsika fotoana ahafahana manao izany ny krizy COVID mieritreritra ny hisaintsaina inona no tokony ho endrik'i Hawai'i rehefa sitrana. Iza amin'ireo mpitsidika tsy hitantsika izao? Iza no manome lanja antsika? WhIch dia namorona no nahatonga kivy eo amin'ny kamaaina? Tranonkala inona avy no mahazo tombony amin'ny fitsaharana amin'ny fitsidihan'ny mpitsidika? Raha fintinina, hanao ahoana ny fizahan-tany fizahan-tany any Hawaii rehefa mahasitrana izy ary ahoana no ahafahantsika manao asa tsara kokoa amin'ny fitantanana ny toerana haleha amin'ny ho avy? Fotoana mbola tsy nisy toy izany hatrizay.
Talohan'ny fianjeran'ny fizahan-tany, ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii (HTA) ny fanadihadiana dia hita fa miharatsy hatrany ny fihetsiky ny mponina momba ny fizahantany satria nitombo ny isan'ny mpitsidika. Ny fitohanan'ny fifamoivoizana, ny fahabetsahan'ny olona ary ny fahasimban'ny tontolo iainana no isan'ireo olana atahoran'ny mponina indrindra. Mitaraina ihany koa ireo mpitsidika noho ny hamaroan'ny olona.
Na dia misy aza ny milaza fa ny vahaolana dia ny "fanakanana" ny isan'ny mpitsidika an'i Hawai'i, ny olana kosa dia sarotra kokoa. Ny teknolojia (finday avo lenta, haino aman-jery sosialy, rafitra GPS) dia namela ny olona hahita - ary hihoatra ny habaka - tranonkala maro izay tsy mahazaka ny isany. Ny olana dia tsy dia hoe manana mpitsidika folo tapitrisa i Hawai'i, fa manana, ohatra, olona an-jatony vitsivitsy mivory amin'ny tranokala iray izay afaka mandray vitsivitsy fotsiny. Na manana fiara be loatra amin'ny làlambe roa izahay izay tsy natao hivezivezy be loatra. Ny tiana holazaina dia hoe na dia ambany aza ny volan'ny fizahan-tany dia mbola mila mitantana fizahantany ihany i Hawai'i.
Ny fandrosoana amin'ny haitao dia nampisy tokoa ilay antsoina hoe "fizahan-tany be loatra". Ny teknolojia dia nampihena ny vidin'ny fitaterana mahatonga ny dia lavitra ho takatry ny olona maro. Ny fampielezana ny haino aman-jery sosialy dia nandrisika ny olona hitsidika toerana tsy fantatry ny ankamaroan'ny mpandeha. Ny fampiharana ataon'ny mpiara-mianatra dia nanjary nitombo ny fanofana fialan-tsasatra vetivety tao amin'ny tanàna fonenany. Ny rafitra GPS dia manamora ny fitsidihan'ny mpitsidika ny lalan-kaleha..
Ny teknolojia fampahalalana sy fifandraisana (TIC) dia afaka manome vahaolana marani-tsaina ihany koa amin'ny fitantanana ny toerana haleha sy hampihenana ny hamaroan'ny olona. Ohatra, any Amsterdam (Netherlands), "Tsidiho ny Amsterdam" mampiasa angona voatahiry ao amin'ny sombin'ny Karatra Amsterdam City handinihana ny fihetsiky ny mpizahatany sy hamoronana fomba hampihenana ny fitohanana. Amsterdam koa dia mampiasa fampiharana iray hampandrenesana ireo mpizaha tany rehefa be loatra ny zavatra manintona iray ary manome soso-kevitra hafa hisolo toerana izy mandritra ny andro. Ny World Travel & Tourism Council (WTTC) dia manome ohatra fanampiny momba ny fampiasan'ny toerana teknolojia ny teknolojia hitantanana tsara kokoa ny fizahantany.2 “Smart Cities” dia nampiasa teknolojia hiatrehana ny fitohanana. London, ohatra, dia mametraka £ 11.50 «vidin'ny fitohanana» mavesatra noho ny fitaterana nankany London afovoany nandritra ny fotoana nisavoritaka
Hawai'i dia tara ao ambadiky ny toerana hafa amin'ny fampiharana ny teknolojia fitantanana toeran-kaleha.
Ohatra, ny Hanauma Bay Nature Preserve ao O'ahu dia heverina ho tantara mahomby amin'ny fitantanana ny toerana. Ny drafi-pitantanana napetraka tamin'ny taona 1990, ary ny fanitsiana taorian'izay, dia nampihena ny isan'ny fitsidihana ny fitehirizana hatramin'ny 7,500 avo isan'andro ka hatramin'ny 3,000 isan'andro (mandra-pikaton'ny COVID-19). Saingy ny rafitra fitantanana ankehitriny an'i Hanauma dia misy vidiny lafo. Rehefa feno ny toerana fijanonana miisa 300 (matetika hatramin'ny 7 ora sy sasany maraina) dia miangona eo alohan'ny fidirana amin'ny làlambe ny mpiambina mba hitodika ny fiara, ny mpitsidika sy ny mponina eo an-toerana izay manao izay hahatafita azy ireo dia tsy nety teny. Ny efitrano fanaovana tapakila dia tarihin'ny mpiasa. Tsy mahazo mamela ny famandrihana an-tserasera sy ny fandoavana mialoha. Io fomba fitantanana fahagola io dia miteraka fahatarana sy fahasosorana, indrindra satria tsy maintsy hasiana fanamarinana tsirairay ny fari-ponenan'ireo mpitsidika valan-javaboary (ekena fa afaka ny mponina). Misy azo antoka fa maromaro vahaolana teknolojia tamin'ny taonjato faharoapolo izay afaka ny fidirana amin'ny ration dia mitantana ny fikorianan'ny mpitsidika tsara kokoa, namana, ary mora kokoa. Ireo mpitsidika sy mponina ankehitriny dia mety hahatsapa ho mahazo aina amin'ny fampiasana ny finday avo lenta sy ny rindranasa - na teknolojia hafa - handahatra sy handoavana ny fitsidihan'izy ireo. Ny teknolojia dia afaka mandray ihany koa ny vidiny miovaova mba hamafana ny fangatahana. Rehefa nitombo ny fizahan-tany manerantany (talohan'ny COVID-19) tranombakoka, toerana manintona ary tranokala maro kokoa no nivadika teknolojia hitantanana ny fidirana sy ny sarany. Teknolojia izao integral ampahany amin'ny izao tontolo izao fizahan-tany fizahan-tany.
Nanova ny diany ny TIC. Nanome hery ny mpitsidika ny haitao, nanomboka ny vanim-potoanan'ny mpanao dia lavitra (DIY) mpanao dia lavitra. Alao an-tsaina ny famoronana Airbnb tsy misy Internet. Efa, ny mpamatsy fizahantany dia afaka mamakafaka data marobe - "angon-drakitra lehibe" - hanondroana ny safidin'ny mpanjifany sy hanome serivisy natokana ho an'ny mpampiasa tsirairay (ny "mpanjifa iray"). Ny Airlines sy ny hotely dia manadihady ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa mba hanovana matetika ny vidiny — izany hoe ny vidiny mavitrika– hampitomboana ny tombom-barotra. Anisan'ireo fikambanana marketing / fitantanana toerana itodiana (DMOs), tsia DMO iray manao bebe kokoa amin'ny teknolojia hanohanana ny orinasan'ny fizahantany sy ny mpandeha lavitra noho ny Singapore Tourism Board sy ny Technology Transformation Group.
Na dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny fampiharana teknolojia aza ireo mpandraharaha fizahan-tany dia tsy dia nisy loatra ny fampiasana teknolojia hiatrehana ny fitantanana ny loharanon-karena sy ny ahiahin'ireo mponina. Manomboka miova izany.
Manerana an'izao tontolo izao, ny fikambananan'ny fizahantany dia manangana “toerana kendrena” mampiasa teknolojia hitantanana loharano, hanatsara ny fifaninanana toerana, ary hanatsara ny fiainan'ny mponina. Tamin'ny taona 2017, ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) dia nikarakara ny kaonferansa eran-tany voalohany natao tany amin'ny toerana kendrena. Tamin'ny fihaonambe faharoa natao tany Oviedo (Espana) tamin'ny taona 2018, solontena mahatratra 600 mahery eran'izao tontolo izao no nanatrika seminera momba ny fomba hampiasan'ny toerana itrangan'ny teknolojia ny fitantanana maharitra ny toerana fizahan-tany.
Tsy misy famaritana tokana ny toeran-tsaina hendry. Ny One Planet Network no mamaritra azy "Amin'ny maha-fizahantany fizahan-tany vaovao, natambatra tamin'ny fotodrafitrasa teknolojia farany ambony, miantoka ny fampandrosoana maharitra ny faritra fizahan-tany, azon'ny rehetra idirana, izay manamora ny fifandraisana sy ny fampidirana eo amin'ireo mpitsidika sy ny tontolo iainana ary mampitombo ny kalitaon'ny zavatra niainany tany amin'ny toerana haleha ihany koa. fanatsarana ny kalitaon'ny fiainana ny mponina. ”
Espaniôla, mpitarika eran'izao tontolo izao amin'ny famolavolana tanjona kendrena, dia nanangana tetik'asa momba ny fandrindrana sy fivoarana an-tsokosoko izay natomboka tamin'ny 2012 tamin'ny alàlan'ny drafitra nasionaly momba ny fizahantany.7 Ho fitsikerana ny ezak'i Espana, Francesc González-Reverté nandinika ny hetsika 980 natomboka na teo ambanin'ny tanàna marani-tsaina na ny drafitra fizahan-tany marani-tsaina nampiharina tamina toerana sy tanàna 25 Espaniola tamin'ny taona 2017. Ny fanakianana dia nahatsikaritra fa amin'ny ankamaroan'ny tanànan'ny mpizahatany, ny ankamaroan'ny fepetra noraisina mba hampitomboana ny faharetana dia natao hampihenana ny làlan-dratsy sy ny vidiny mifandraika amin'izany. fizahan-tany faobe. Hitan'ny mpanoratra fa “ny toerana fizahan-tany Espaniôla izay nandray ny drafitra fitsangatsanganana an-tsakany sy andavany mba hamahana ny fihetsik'izy ireo manoloana ireo singa sasany mahomby amin'ny tanàn-dehibe, indrindra ny kalitaon'ny tontolo iainana sy ny fiainan'ny mponina, saingy mirona tsy ho lasa lavitra…
Ny tanjona dia mihevitra ny drafitry ny fizahan-tany mahomby ho toy ny fotoana ahafahana manatsara ny fifaninanana fa tsy paikady holistic amin'ny fanatsarana ny faharetan'ny tanàna. " Nanohy ny hevitr'ilay mpanoratra fa ny teknolojia dia "tokony ho ao anatin'ny ADN misy tanàna mitady hampihatra drafitra fizahan-tany manan-tsaina."
Ny teknolojia dia mety hanampy amin'ny fanatratrarana tanjona, saingy tsy izy irery no tanjona. Ary ny vahaolana ara-teknolojia dia tsy maimaim-poana. Tsy maintsy asehon'izy ireo fa mora vidy izy ireo noho ny vahaolana hafa ary ny tombony mety ho azony noho ny vidin'ny fampiasana azy ireo. Ny hevitra dia ny handray vahaolana ara-teknolojika hendry. Ny vahaolana tsara indrindra dia mety miovaova arakaraka ny toerana alehanao mankany amin'ny toerana aleha arakaraka ny toe-javatra misy eo an-toerana sy ny olana voavaha. Izay misy dikany ho an'i Singapaoro dia mety tsy misy dikany ho an'i Hawai'i.
Ny teknolojia dia afaka manampy amin'ny fampiharana politika tsara, saingy tsy afaka manitsy ny simba ateraky ny politika ratsy. Ohatra iray amin'ny politika ratsy ny fidirana ambany indrindra hianika ny Tsangambato Fanjakana Diamond Head. Nanomboka nandoa $ 1 isaky ny mpivezivezy tao amin'ny Diamond Head ny Fanjakana tamin'ny Mey 2000 ary $ 5 isaky ny fiara tsy miankina nanomboka tamin'ny Janoary 2003.9 Amin'izao fotoana izao, ny saram-pidirana $ 5 isaky ny fiaran'ny fiara tsy miankina dia mihatra amin'ny valan-javaboary rehetra izay mandoa saram-pidirana; ekena maimaimpoana ny mponina raha tsy ao amin'ny Monument Diamond Head State. (Ireo fiara fivarotana dia mandoa vola bebe kokoa.)10 Raha ampitahaina dia miambina $ 7.50 isaky ny mpitsidika olon-dehibe miaraka amin'ny fidirana maimaimpoana ho an'ny mponina ny faritr'i Hanauma Bay ao amin'ny County County any Honolulu. Valan-javaboary maro izao no miantoka ny fidirana $ 15 na mihoatra isan'olona.
Ny renivohitra eropeana an'ny fikambananan'ny fizahan-tany mahiratra dia manohana fifaninanana isan-taona eo amin'ireo tanàn-dehibe eropeana "mba hampahafantarana ny momba ireo fitaovana sy fepetra ary tetik'asa fizahan-tany manan-tsaina ampiharina amin'ireo tanàna amin'ny sokajy efatra: ny faharetana, ny fahazoana miditra, ny nomerika ary ny lova ara-kolontsaina ary ny famoronana. Ho an'i 2020 Gothenburg (Suède) ary Malaga (Espana) no mpandresy. Niavaka i Gothenburg “tamin'ny fanolorana nomerika izay manampy amin'ny fanatsarana ny traikefa ho an'ny olom-pirenena sy ny mpizahatany. Ao anatin'izany ny vahaolana ho an'ny ho avin'ny fifamoivoizana sy ny fitaterana, ny angona misokatra ary koa ny fepetra maharitra. Ny tanàna amoron-drano dia miara-miasa amin'ny mpandray anjara sy sehatra indostrialy maro karazana hampihatra fomba tena tafiditra amin'ny fizahan-tany mahira-tsaina.
Nandresy ny tanànan'ny morontsirak'i Malaga satria "mifantoka mafy amin'ny fampiasana ny teknolojia vaovao izy hanatsarana ny traikefan'ny mpitsidika ary hanamafisana ny fahaiza-manaon'ny orinasa eo an-toerana. Ny tanàna koa dia mpitarika amin'ny fampandraisana anjara ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary miasa mba mamafy ny voan'ny fizahan-tany manan-tsaina amin'ny sehatra fanabeazana. ” Ny antsipiriany misimisy momba ireo mpandresy roa dia atolotra amin'ny alàlan'ny rohy omena ao amin'ny fanamarihana ambany pejy. Ny compendium ny fanao tsara indrindra eo ambanin'ny sokajy efatra amin'ny fifaninanana eropeana ho an'ny 2019 sy 2020 dia misy ao https://smarttourismcapital.eu/best-practices/
Nanova tanteraka ny fomba fitetezan'ny olona ny haitao ary toa hitombo haingana izany fiovana izany. Tokony hamolavola drafitra momba ny fomba tsara indrindra hampiasana teknolojia hitantanana ny fizahantany i Hawaii ary hanatsara ny fitantanana ireo nosy ireo ho tombontsoan'ny mponina sy ny mpizahatany. Izy io dia hifanaraka tsara amin'ny asan'ny tetik'asa vaovao napetraky ny Governora Ige, Hawai'i Economic & Community Navigator, niampangana ny "Fanovana ny làlan'i Hawaii mankany amin'ny toekarena mandanjalanja, manavao ary maharitra izay mampifandanja ny vahoaka, ilay toerana, ary ny kolontsaina miaraka amin'ny tontolo iainana, tany ary ranomasina. ”
Ao amin'ny fanarenana miadana miadana avy amin'ny COVID-19, ny fanjakana dia azo antoka fa hahita vitsy kokoa noho ireo mpitsidika folo tapitrisa amin'ny taona 2019. Miaraka amin'ny mpitsidika vitsy kokoa, zava-dehibe tokoa ny fifantohana amin'ny fisintomana fandaniana avo kokoa, ny mpitsidika misy vokany ambany kokoa amin'ny fifangaroana. Ny drafitra fitsangatsanganana an-tany fizahan-tany ho an'i Hawaii dia mety mitaky fampiasana fampiharana teknolojia toy ny fitrandrahana angon-drakitra sy famakafakana mba hahafantarana tsara hoe iza ireo mpitsidika ireo ary hampifanaraka ny hafatry ny varotra arak'izany.
Ny teknolojia dia hanakiana ihany koa eo amin'ny tontolon'ny Post COVID hanao fitiliana ara-pahasalamana ho an'ireo mpandeha tonga. Mila manome toky ny mpandeha i Hawai'i fa azo antoka ny fitsidihana azy - ary mila manome toky ny mponina isika fa tsy tandindomin-doza ny mpitsidika tonga. Satria saika an'habakabaka daholo ny fahatongavan'i Hawai'i, ny haitao fanaraha-maso mahomby dia afaka manome tombony ho an'ny fanjakana amin'ny fanarenana fizahan-tany. Ireo toerana toa an'i Orlando sy Las Vegas miaraka amina fitsidihana fitsangatsanganana betsaka dia ho sarotra tokoa ny hahatratra ny fanaraha-maso mitovy amin'ny fanjakana nosy toa an'i Hawai'i.
Ny teknolojia dia mety hanohana ny fitantanana ny toeran-kaleha amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fanaraha-maso ny toerana aorian'ny fahatongavana miaraka amin'ny angon-drakitra voangona tsy mitonona anarana nomen'ny finday avoakan'ny mpitsidika mba hamolavolana vahaolana hanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny fahamaroan'ny olona manintona mpizahatany. Ny governemanta amerikana dia manao dinidinika amin'ireo orinasan-teknolojia amerikanina toa ny Facebook sy Google mba hampivelarana ny haitao tahaka izany mba hahatakarana ny fiparitahan'ny virus coronavirus.14 Ny firenena sasany dia efa mampiasa ny fanarahan-toerana mba hiadiana amin'ny areti-mandringana. Ny fanadihadiana iray ao amin'ny University of Maryland dia mampiasa angona data finday tsy fantatra anarana izay havaozina isan'andro mba hahitana raha manaraka ny baikon'ny trano any an-trano ny olona.15
Mazava ho azy fa tonga ny fotoana handraisana ireo rafitra fandoavam-bola nomerika hanangonana vola miditra hamatsiana ara-bola ireo zaridaina, làlana fitsangantsanganana, morontsiraka ary fotodrafitrasa ho an'ny daholobe. Tsy vaovao ny teknolojia, noho izany isika afaka mijery ny fomba fanao tsara indrindra ampiasaina amin'ny toerana maro eran'izao tontolo izao hitadiavana hevitra.
Ny drafi-pahefana stratejika momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany izay vao natsangana (2020-2025) dia nametraka làlana iray ho an'ny rafi-pitantanana fitadiavana tanjona. Ao anatin'ny rafitra, miantso ny HTA ny drafitra mba “hanombatombana ary hampiasa raha vao azo atao, ireo teknolojia mipoitra.”16 Tsy misy fotoana tsara noho ny ankehitriny, satria mikasa ny ho sitrana izahay hiroso amin'ny maodely "fizahan-tany manan-tsaina" miorina amin'ny teknolojia. Tsy tokony hamily modely ho an'ny fanarenana taloha amin'ny fampiroboroboana tsy am-piheverana isika: apetraho ny "vody eo amin'ny seza ary lohanao eo am-pandriana." Mila mitantana ny fizahantany isika na inona na inona ny totalin'ny tonga. Ny famotehana ny indostrian'ny mpitsidika nateraky ny COVID-19 dia nanome antsika fotoana hanombohana fanombohana (sy marani-tsaina).
Lahatsoratra natolotr'i Frank Haas sy James Mak
Frank Hass dia ao anatin'ny vaovao #rebuildingtravel fifanakalozan-kevitra ( www.rsf-ref.travel ), fiaraha-miasa amin'ny Fiaraha-miasa iraisan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany, ny Birao fizahantany afrikanina ary ny Ivon-toerana momba ny krizy sy fitantanana fizahan-tany manerantany (GTRCM)